Naya Drishti | युवा पुस्ताले हस्तक्षेप नगरे मुसरफहरु जन्मिनेछन - Naya Drishti युवा पुस्ताले हस्तक्षेप नगरे मुसरफहरु जन्मिनेछन - Naya Drishti
प्रसंग अध्यादेशको। बिरालोलाई जती सुकै ठुलो सिंहासनमा राखे पनि दुध पाए चोरेरै छोड्छ । बिरालोको दुध चोर्ने प्रबृतिलाई हामी प्रश्न गर्छौ – ‘यति सम्मानित ठाउमा राखेको बिरालोले किन चोर्ने ?’ तर मुर्ख सिंहासनमा राख्ने मान्छे हो कि दुध चोर्ने बिरालो ? खासमा बिरालोलाई त्यो संहासनको केहि महत्व नै हुँदैन ।
त्यस्तै नेपालमा आज भोली अध्यादेशको बारेमा ठुलो चर्चा छ । कोही भन्छ ठिक । कोही भन्छ गलत । म भन्छु – प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले ठिक गरे किनकी उनले जिबनभरि सिकेको ज्ञान भनेको नै यस्तै उल्फट्याङ्ग त होनी। कुनै बेला समयमा उनका उल्फट्याङ्ग कामलाई राष्ट्रबादिको जलप लेपियो। अहिले यो महामारिको बेला आफुले जानेको ब्रह्मास्त्र अध्यादेश मार्फत हाने । जो सङ्ग जे छ त्यही गर्ने त होनी । हासो लाग्ने कुरा त विश्व साम्राज्यबाद सङ्ग लड्ने महान क्रान्तिकारी पुर्ब माओबादी मित्रहरु सबै ओलीलाई पुगेनन।
उनिहरु अहिले न बिरोध गर्न सक्छन न समर्थन किनकी ओली सङ्गको सहमती विशुद्ध स्वार्थ केन्द्रीत थियो र केहि बोले खतम। आफैले समर्थन गरेको सरकार आफ्नै घाटी निमोठ्दा आफुलाई क्रान्ती नायक भन्न रुचाउने प्रचण्ड आज भोली केहि सोच्दै होलान कि बिहान ननभेज र साझ भेज व्यवस्थापन गर्दै होलान ? यो गम्भिर प्रश्न छ ।
नेपाली समाजले बहुलबाद बुझेको छैन यसमा म सयौं तर्क पेस गर्न सक्छु । बुद्धिजिबिहरु देश र समाजलाई चेतनसिल बनाउने भन्दा पनि आफ्नो पकेट के गर्दा सिल गर्न सकिन्छ त्यता केन्द्रीत हुँदा समाज पछी पर्दैछ । यहाँ एउटा चिज मात्र अन्धबिस्वास गर्ने हाम्रो समाज छ । राज संस्थाबाट गणतन्त्रमा धकेल्न धेरै समय खर्चियौं। अहिले दलतन्त्र हाबी छ । यस्ले न्याय , अन्याय छुट्याउने आँखामा कालो पट्टी बाधेको छ ।
हामी एउटालाई कुनै बेला देबत्वकारण गर्न पनि पछी नपर्ने र फेरी राक्षसिकरण गर्न पनी पछी नपर्ने समाजले कस्तो नेता निर्माण गर्छौं भन्ने कुरा प्रष्ट छ । राजनिती गर्ने राजनितिज्ञ , वकिल पनि हुने।डाक्टर पनि हुने। पत्रकार पनि हुने। किसान पनि हुने र समग्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा अल्पज्ञानी जोकर हुने अनि त्यही जोकरका जोक सुनेर मख्ख जनताले त्यही पात्रबाट हरेक समस्या समाधानको आशा गर्ने , आसा पुरा नहुने र निरास हुने फेरी गालीगलोज गर्ने र अर्को त्यस्तै जोकरको पिछा गर्ने प्रबृति हाबी छ ।
बहुलबादलाई मैले राजनैतिक भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न किनकी फेरी केहि साथिहरु आफुलाई महान सैद्धान्तिक बुझ्लान । मैले भनेको बहुलबाद भनेको बहुअस्थित्वको स्विकार जहाँ अहिले माहामारी छ यो बेला डाक्टरहरु देशको प्रमुख भूमिकामा देखिउन । जुन बेला भोकमारी आउछ त्यो बेला किसान प्रमुख भूमिकामा आउन । जुन बेला बैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ त्यो बेला सैनिक प्रमुख भूमिकामा आउन । जुन बेला शैक्षिक सवाल उठ्छ त्यो बेला शिक्षक प्रमुख भूमिकामा देखिउन तर यि सबै आज आदेश पालक मात्र हुने व्यवस्थाले कसरी अघी पुगिएला ?
अन्त्यमा आज आबस्यकता एउटा पुर्ती अर्को, समस्या एउटा समाधान अर्को भएर अन्योलग्रस्त कुहिरोको काग बनेको नेपाली समाजले सही दृष्टिकोण पाउनु पर्छ । नयाँ पुस्ता हस्तक्षेपकारी भूमिकामा नदेखिने हो भने प्रवेश मुसरफ जन्मन सक्नेछन । लोकतन्त्रको बिकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो । उन्नत लोकतन्त्र भनेको व्यवस्थित राज्य प्रणाली जहाँ बिज्ञ आदेश पालक नभएर निती निर्माणमा हुन्छन । न्याय र अन्यायको पट्टी हट्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ ।
#अध्यादेश #शेरबहादुर डाँगी
कोरोना भाइरस बारे कविता: हेर्यो नै भने आकासै बाट संसारै बन्द छ, नहिड बाहिर नगर भिड यसले भन्दछ।